Escrime-Fiofanana: 14 mianadahy miofana ho mpanazatra “niveau 1” - ewa.mg
Escrime-Fiofanana: 14 mianadahy miofana ho mpanazatra “niveau 1”
News - Escrime-Fiofanana: 14 mianadahy miofana ho mpanazatra “niveau 1”
Miofana ho mpanazatra “niveau 1”,
nanomboka ny asabotsy lasa teo, etsy amin’ny kianja
mitafon’Ankorondrano, ireo teknisianina eo anivon’ny taranja
escrime. Miisa 14 mianadahy izy ireo ny miatrika izany, mandritra
ny 10 andro, izany hoe, haharitra hatramin’ny 21 septambra izao ny
fiofanana. Fiaraha-miasa eo amin’ny Komity olympika malagasy sy
federasiona iraisam-pirenena ny taranja escrime ary ny federasiona
malagasy ny escrime ity fifampizarana ity. Mpampiofana manana
traikefa ny manome ny fiofanana, ahitana an-dRamanadraivonona
Elinjara Luc, sy ny maitre Faly, samy manampahaizana
Ilaina ny fanomezana fampiofanana
toy izao eo amin’ity taranja ity satria efa manomboka mivoatra ny
escrime eto amintsika, raha ny nambaran’ireo mpiofana. Mbola vitsy
rahateo ny mpanazatra eto Madagasikara ho an’ity taranja ity kanefa
efa manomboka mitombo ireo atleta miangaly izany. Isan’izany i
Jolan izay efa niatrika fiadiana ny tompondaka an’i Afrika. Araka
ny fanazavana, mizara roa ny fampiofanana ka misy ny an-tsoratra
ary misy kosa ny fampiharana, hidinana mihitsy an-kianja.
L’article Escrime-Fiofanana: 14 mianadahy miofana ho mpanazatra “niveau 1” a été récupéré chez Newsmada.
Ahitsy ny fiheverana fa ny literatiora dia tsy fialamboly fotsiny ihany na fanalana andro fa tena fiainana mihitsy. Ampirisihina ny ankizy hamaky boky, indrindra ny literatiora fahiny, ary ampidirina amin’ny fandaharam-pianarana ny fototra sy tantaran’ny literatiora malagasy. Hatsangana ny sekoly manokana ho an’ny zava-kanto malagasy … Miroborobo, saingy tsy mivoatra fa mihemotra ny literatiora ankehitriny. Tsy ampy ny ivontoerana na fampianarana manokana mikolokolo ny tanora amin’ny sehatry ny zavakanto. Zary lasa mandeha amin’ny herin’ny tenany ny mpanoratra amin’izao ka tsy maharitra ela fa mandalo ihany ny hazavana entiny. Rahateo, efa nampianarina antsika tany amin’ny ambaratonga fototra fa ny “literatiora dia natao hanalana andro, fialamboly”.Andaniny, tsy ampy ny faribolan-tsehatra hifampizarana, indrindra ny takalo eo amin’ny zoky sy ny zandry. Ny zandry aty aoriana , mieritreritra efa mahasongona sahady ireo zokiny, ny zokiny rahateo tsy manao dingana voalohany amin’ny zandriny « araka ny lalàn’ny fiarahamonina tokoa izay » . Amin’izaovanimpotoana izao, mifamahofaho be ihany ny resaka mpanoratra, ny fanoratsoratana ainga aparitaka etsy sy eroa , indrindra amin’ny tambajotran-tserasera sy ny fanaovana hetsika tsy masaka tsara. Ny famoaham-boky tefy maika ve no mahafaritra ny antsoina hoe Mpanoratra na poeta ? Tsy misy hifanomezan-tsiny … Tsy misy handrara tsy hanoratra velively … Aina ho an’ny firenena rahateo ny literatiora ary voninahitra ny fananana mpanoratra maro …. Fa mpanoratra manao ahoana tokoa ny hovolavolain’ity taom-polo ity?”Manana adidy ny tsirairay na ny fanjakana na ny olontsotra mpamaky boky, indrindra ny mpanoratra sy ny mpandalina literatiora. Anisan’ny vahaolana amin’izao aretin’ny literatiora izao, ny fanarenana ifotony. Ampahafantarina ny ankizy any amin’ny garabola sy ny fanabeazana fototra ny anjara asan’ny literatiora sy ny maha zava-dehibe azy eo anivon’ny firenena sy ny maha olona. Ampahany ihany ireo fa maro ny azo atao hanatsarana ny tontolon’ny literatiora.Narilala L’article FAKAFAKA: ho fanatsarana ny literatiora malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Fifandonan’ny miaramila sy dahalo: dahalo roa lavo, omby 30 tafaverina
Nitrangana fanafihan-dahalo tao amin’ny kaominina ambanivohitr’i Andria, distrikan’i Maintirano, ny zoma maraina faha 17 aprily lasa teo. Lasan’ireo dahalo 12 lahy tamin’izany ny omby manodidina ny 30 isa tamina tokantrano iray. Ny ampitson’io, roso nanao ny fanarahan-dia ireo miaramila miisa dimy niaraka tamin’ny tompon’omby, tokony ho tamin’ny 7 ora maraina. Teny an-dalana, nanao fanadihadiana ireo miaramila ka nametraka ny paikady rehetra. Fantatry ny miaramila fa tsy maintsy handalo teo amin’ny kizon’i Mangabe ireo dahalo ka efa niandry teo izy ireo. Io kizo io izay tafiditra ao amin’ny fokontanin’i Mangabe, hoy ny loharanom-baovao iray any an-toerana. Raikitra ny fifampitifirana teo amin’ny roa tonta. Lavo nandritra izany ny dahalo miisa roa raha tafatsoaka kosa ireo namany. Tafaverina tamin’ny tompony ireo omby rehetra.Henintsoa Hani L’article Fifandonan’ny miaramila sy dahalo: dahalo roa lavo, omby 30 tafaverina a été récupéré chez Newsmada.
Rugby à sept, vehivavy: hanoman-tena any ivelany ny Makis de Madagascar
Niverina namonjy ny kianja ny mpilalaon’ny Makis de Madagascar, sokajy vehivavy, rehefa nihiboka dimy volana. Hanoman-tena,amin’ny lalao famerenana, hiadian-toerana amin’ny “Lalao olympika” (JO 2021), izy ireo. Nanomboka amin’ny fomba ofisialy, omaly zoma teny amin’ny kianja Makis Andohatape­naka, ny fampivondronana voalohany sady fanomanantenan’ny Makis de Madagascar vehivavy, taranja rugby lalaovina olona fito, ho an’ny lalao famerenana “repêchage”, hiadian-toerana amin’ny “Lalao olympika” (JO 2021), ny volana marsa 2021. Ankoatra ny fanazarantena eto an-toerana, hisy fanomanantena roa, hatao any ivelany. Ny iray, hotanterahina atsy Afrika, ny volana oktobra na novambra, izay tsy mbola voafaritra ny daty sy ny firenena hanaovana azy. Na izany aza, hisy “tournoi à quatre”, handraisan’i Madagasikara sy i Afrika Atsimo ary i Tonizia sy i Kenya anjara, amin’izany. Tsiahivina fa ankoatra ny Makis, manomana ny lalao famerenena ihany koa i Tonizia. Any Japon ny faharoa, ny volana desambra na janoary 2021. Fiaraha-miasa amin’ny masoivohon’i Japon sy ny Malagasy rugby izany, ary tohin’ilay andiany voalohany notanterahina ny volana jona 2019. Tafiditra ao anatin’izao fiomanantenan’ny Makis izao ihany koa ny fifanintsanana hiadian-toerana, amin’ny am­boara eran-tany 2023, hatao any Frantsa, eo amin’ny rugby ho an’olona 15. 20 mirahavavy ny miatrika ity fanazarantena voalohany ity, rehefa avy nandalo fitiliana ny Covid-19, ny fiandohan’ny herinandro lasa teo. Natomboka tamin’ny famerenana ny tanjaka, tamin’ny alalan’ny fanabokonana hozatra, izany, haharitra eo amin’ny herinandro eo ho eo. Ao­rian’izay vao hiditra amin’ny fandraisana baolina. Marihina fa efa samy nanao fanazarantena mitokana tany aminy avy ireo mpilalao rehetra, nandritra ny fotoan’ny fihibohana. Ho an’ny Makis de Ma­dagascar, lehilahy, hisy fiaraha-miasa amin’ny mpilalao frantsay iray nandrafitra ny XV de France ka tafiditra amin’izany ny fanomanana ny “Circuits mondiaux 2021”.TompondakaL’article Rugby à sept, vehivavy: hanoman-tena any ivelany ny Makis de Madagascar a été récupéré chez Newsmada.
Escrime: mpanazatra 14 mianadahy nahazo mari-pankasitrahana
Nifarana, omaly, tetsy amin’ny kianja mitafo Ankorondrano ny fiofanana ho mpanazatra “niveau 1”, taranja Escrime. Notolorana mari-pankasitrana izy 14 mianadahy, nandritra ny lanonam-pamaranana. Raha ny fanazavana, nisy ny fanadinana nampanaovina ireo mpiofana ka afaka avokoa izy 14 mianadahy. Tanjona tamin’ity fiofanana ity, raha ny nambaran’ny mpampiofana, Ramanandraivonona Elinjara Luc, ny fampahafantarana bebekokoa ny taranja Escrime. Eo ihany koa ny mba hahafahan’ny mpiofana manampy ny “Coach” any amin’ny toerana misy azy avy. Marihina, afaka mandray ekipa sy klioba amin’izay, manomboka izao ireto nahavita fiofanana ireto. Tetsy an-kilany, nanome toky fa hampihatra ny fahalalana noraisina ireo mpiofana ary tsy handraraka ilo mby an-doha nampitaina rehetra. Tonga nanatrika ny lanonam-pamaranana ny Komity Olympika Malagasy sy ny Federasiona Malagasy ny Escrime, nahitana ny filoha lefitra sy ny mpikambana hafa. Mi.RazL’article Escrime: mpanazatra 14 mianadahy nahazo mari-pankasitrahana a été récupéré chez Newsmada.